Maalin: Janaayo 26, 2019
Musiibo Goobta Madaarka Antalya
Bartamihii toddobaadkan, duufaano iyo tuullooyin wax ku ool ah oo Antalya ka shaqeeya iyo degmooyinkeeda ayaa naftooda ku waayey. Xeryo ku yaal Kumluca oo sababay khasaare ba'an ayaa sababay dhimashada 2 muwaadin. Markii gaadhigu ku jiiday biyaha wabiga [More ...]
Terminalka baska, oo u shaqeynayay degmada Mustafakemalpaşa ee Bursa ilaa 1990-yadii, wuxuu helay muuqaal casri ah oo leh dhismo dhameystiran oo ay dhiseyso Dawladda Hoose ee dabaqa ilaa dabaqa. Dhanka kale, mashaariicda mustaqbalka u qaadi doonta Bursa [More ...]
Tikidhada loo iibsado Euphrates Express
Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) in la iibiyo tikidhada on dhaqdhaqaaqa rakaabka ka Elazig in Adana Yufraad Express, kaas oo ka furmay gaadhi oo aadan haysan dhibaato. Rakaab badan ayaa istaagay. Sida laga soo xigtay mid ka mid ah rakaabka ayaa sheeganaya in Elazığ [More ...]
Mashiinka Baska Cusub ee Waddada
Dowlada Hoose ee Magaalada polzmir waxay dhameystirtay howlihii mashruuca dhismayaasha adeega degmada iyo baska uu bilaabay ee Çeşme. Dhismaha isla barxada waxay ku buuxin doonaan isha naqshadooda. Izmir degmada Metropolitan, goobaha Turkey ee dalxiiska caansan dunida ee [More ...]
GEFCO waxa ay ka qaadaysaa kooxaha xawaaladda PSA inay taageeraan Xarunta Cusub ee Kenitra ee Morocco
Iyada oo khibraddeeda aan dhameystirnayn u leh logistics-ka gawaarida iyo xirmooyinka sahayda silsiladaha isku-dhafan, GEFCO waxay billowday gaadiidkeedii ugu horreeyay ee 2018 bishii Diseembar 2 si ay u taageerto xarunta PSA Group ee cusub ee ku taal Kenitra, Morocco. 2019 dhamaadka 45 [More ...]
Turkey baabuur Industries Inc. iyo Dugsiga Language Time İngilizce u dhexeeya "maamuuska iskaashiga" la saxiixay ka leexinayn of Protocol-barashada af shisheeye. Wakiilka TÜVASAŞ oo uu wehliyo Kuxigeenka Maareeyaha Guud Dr. Yakup Karabağ iyo Waqtiga Ingiriiska [More ...]
Maanta taariikhda 26 January 1925 Xeerka No. 548 ee dhismaha iyo hawlgalka Ereğli Karadere Shimendiferleri ayaa la soo saaray. 26 Janaayo 2017 1915 Khudbadda loogu talagalay Bridge Bridge. Xarunta Daelim-Limak-SK-Dhismaha ayaa ku guulaysatay hindise